WARBIXIN: 3 Sababood Oo Liverpool Ku Adkaynaya In Ay Guul Ka Gaarto Kooxda Porto – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 3 Sababood Oo Liverpool Ku Adkaynaya In Ay Guul Ka Gaarto Kooxda Porto
WARBIXIN: 3 Sababood Oo Liverpool Ku Adkaynaya In Ay Guul Ka Gaarto Kooxda Porto
Indhaha taageerayaasha adduunka ayaa maan si weyn u sugaya tartanka champions league oo dib u soo laabtay kadib markii uu joogsaday muddo laba bilood ah kadib markii ay dhamaadeen wareegii Group-yada.
Waxa bilaabmay wareega 16-ka tartanka champions league oo ay wada ciyaarayaan kooxo waaweyn kuwaas oo ku dagaalami doona ku guulaysiga tartanka.
Wareegan ayay isku dheceen kooxaha Liverpool oo England ka socota iyo Fc Porto oo Portugal ka socota iyaga oo wada ciyaara doona caawa.
Liverpool ayaa wareega Group-yada kaga soo baxday kaalinta 1-aad iyada oo ku dhacday kooxda reer Portugal ee Fc Porto oo wacdaro soo dhigay.
Waxa si weyn loogu saadaalinayaa in ay kooxda Liverpool si fudud ugu soo bixi karto wareega xiga marka loo eego magaca kooxda reer England.
Laakiin xaqiiqada marka laga hadlo sidaas way ka duwan tahay waxana aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 3 sababoo oo Liverpool kulanka uga dhigi kara mid adag.
1.Wakhtigii Kulankii Southampton: Kooxda Liverpool ayaa kulankii ugu dambeeyay ciyaartay iyada oo la ciyaartay kooxda Southampton kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league 72 saacadood ka hor kulan ay la ciyaari doonto Porto, kulankii Southampton ayaa xiddigaha Liverpool ka dhigi kara qaar daalan maadama wakhti yar u dhexeeyay lada kulan.
2.Rikoorka Guuldaro la,aanta Porto ee Horyaalka xilli ciyaareedkan: Kooxda Porto ayaan ilaa haatan wax guuldaro ah la kulmin horyaalka hadii ay noqoto garoonkeeda iyo waliba meel ka baxsan garoonkeeda, Porto ayaa horyaalka ku hogaaminaysa 55 dhibcood oo ay ka heshay 21 kulan 17 kulan oo ay badisay iyo 4 kulan oo ay bar-baro gashay.
3.Awooda Weerarka ee Porto & Dhibaatada Daafaca ee Liverpool: Weerarka kooxda Porto ayaa ilaa haatan dhaliyay 67 gool waana rikoor qiyaasi ah xilli ciyaareedkan, Porto ayaa leh weerar dab ah oo ay hogaaminayaan xiddigaha Vincent Aboubakar Iyo Moussa Marega kuwaas oo dhaliyay 31 gool oo ka mid ah 53 ay Fc Porto dhalisay.
Liverpool ayaa dhankeeda ku dhibaatoonaysa daafaca iyaga oo xilli ciyaareedkan sameeyay khaladaad badan oo kooxda ku keenay in ay dhibco lumiso horyaalka iyo champions league-ba.
Dhibaatooyinkaas ayaa kooxda Liverpool ku adkaynaya in ay si dhib yar ugu gudubto wareega xiga sida ay dad badan filayaan.